विचार / विश्लेषण सम्पादकीय : संविधान संसोधनबारे सरकारको दृष्टिकोण प्रष्ट पार Friday, 23 Sep, 2016 5:10 PM
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पहिलो प्राथमिकता उनकै भाषामा मधेशी र जनजातीका मागलाई संबोधन गर्न संविधान संशोधन हो । शायद, दाहालको यही उधारो आश्वासनलाई मानेर संविधान बहिष्कार गरेको मोर्चाले अचानक संविधान मान्यो । त्यतिमात्र होइन, दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन नै गर्यो ।
तर प्रधानमन्त्री भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि मधेशी मोर्चाका मागलाई संवोधन गर्ने मुद्धा ओझेलमा छ । भारत भ्रमणमा जानुअघि संविधान संशोधन संसदमा दर्ता गर्ने सार्बजनिक प्रतिबद्धता जनाएका प्रधानमन्त्री त्यसमा पूर्णतः असफल भएका छन् । नयाँदिल्लीमा समकक्षी नरेन्द्र मोदीसमक्ष समेत संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर फर्केका दाहालले घरेलु बिषयलाई द्धिपक्षीय साझा मुद्धा बनाएर राष्ट्रबिरोधी व्यवहार त प्रदर्शन गरे नै, मोदीलाई समेत गलत ‘ब्रिफिङ’ गरे ।
प्रधानमन्त्री दाहालले मधेशी मोर्चाका मागलाई संवोधन गर्न कुनै गम्भीर गृहकार्य अघि बढाएका छैनन् । उनी अख्तियारद्वारा अघि बढाइएको लडाकु आर्थिक घोटालाको छानवीनलाई सत्ताको पहुँचमा दबाउने खेलको नेतृत्व गरिरहेका छन् । दुनियाँमा मुलुकको कार्यकारीले अख्तियारको जस्तो जिम्मेबार निकायका प्रमखुलाई ‘मैले मिलाइसकें, अव भ्रष्टाचार र घोटाला छानविन अघि बढ्दैन’ भन्ने जस्ता सार्बजनिक अभिव्यक्ति दिंदैनन् । भ्रष्टाचार अनुसन्धानको बिरुद्ध यस्तो पक्षपोषण खुलेआम गर्ने प्रधानमन्त्री छन् भन्नु पर्दा नागरिकलाई पीडाबोध भएको छ । अव यस्ता सरकार प्रमुखबाट सकारात्मक बिकासको अपेक्षा कसरी गर्ने ? प्रधानमन्त्री दाहाल संविधान संशोधनप्रति कति पनि गम्भीर छैनन भन्ने प्रमाण त्यसको मुख्य सरोकार पक्षसंग संवादहिनता हो । उनले संशोधनबारे दिल्लीमा वार्ता गरे तर गर्नुपर्ने एमाले र त्यसका अध्यक्षसँग भने उक्त बिषयमा अहिलेसम्म संवादसमेत गरेका छैनन् । एमालेसँग संविधान संशोधनका बारेमा औपचारिक छलफल समेत आब्हान गरिएको छैन । एमालेले प्रष्ट रुपमा औचित्य र आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने बताइरहेका बेला संशोधन कुन कुन बिषयमा गर्ने भन्ने समेत सत्तारुढ पक्षले राख्न सकेको छैन । बरु एमालेको उपयुक्त अडानलाई संशोधन गर्नै नचाहेको, मधेशी मोर्चाका मागप्रति अनुदार भएको भन्दै जर्बजस्ती मधेशबिरोधी बनाउने प्रयास भएको छ ।
भारतको प्रतिक्रियात्मक कुटनीतिः नेपाल–चीन कारोवारमा किन उत्तेजना ?
गोवामा दाहालको ब्यवहारले नेपालको राष्ट्रिय विश्वसनीयतामाथि धक्का प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण: सार्बभौम हैसियत कायम राख मोदीलाई बुझाएको पत्र सार्वजनिक गर राजनीति